औ’षधिको मूल्य २५ करोड? – Sandesh Press
औ’षधिको मूल्य २५ करोड?
August 2, 2021 207
स्पा’इनल म’स्कुलर एट्रोफी (ए’सएमए) रोगका लागि यो दिइन्छ। भैरहवाकी २२ महिने सियोना श्रेष्ठ उक्त औ’षधिबाट उपचाररत छिन्। यी सानी नानीको महँगो उपचार यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। एलिना गुरुङ श्रेष्ठ र डा. सन्दिप श्रेष्ठकी छोरी एलिनाको दुबईमा उपचार भइरहेको छ।
सियोनालाई ५ महिना हुँदादेखि नै एसएमए रो’गको लक्षण देखिएको थियो। यो रोग विश्वकै दु’र्लभ एवं महँगो मे’रुदण्डसम्बन्धी रोग हो। सियोनाका अभिभावकले करिब १० महिनादेखि उनको विभिन्न देशमा उपचार गराइरहेका छन्। गत असार ३१ गते उनलाई दुबईको एक अस्पतालमा जो’ल्जेन्स्मा नामक महँगो औ’षधि दिइएको हो।
सियोनामा मावलका हजुरबुवा पूर्ण गुरुङका अनुसार औ’षधि दिइएपछि उनको शरीरमा सेतो रक्तकोषको कमी देखिएको छ। उनलाई आईसीयूमा राखिएको छ। महत्वपूर्ण औ’षधि प्रयोग गरिएका कारण उनलाई केही सा’इड इ’फेक्ट देखिएको तर नियन्त्रण आउन सम्भ हुने चिकित्सकहरूलाई परिवारलाई अ’वगत गराएका छन्।
सि’योनाको स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा आउन केही दिन लाग्ने डाक्टरहरूको भनाइलाई उधृ्त गर्दै गुरुङले जानकारी दिए।
Prevकक्षा १२ सहित सबै तहका परीक्षा स्थगित
Nextचिसो तथा रुघाको लागि रामवाणकाे काम गर्छ प्याजले, यस्ताे छ प्रयोग गर्ने तरिका !
“द भ्वाइस अफ” नेपालका चार उत्कृष्ट प्रतियोगी छनोट…
तिहार लगत्तै लाग्नेछ वर्षको अन्तिम चन्द्रग्रहण, यी राशिका मानिसमा पर्नेछ विशेष असर !